१० वर्ष निसन्तानको पीरमा बिताइएकी महिलाले एकै पटक जन्माईन तीन छोरा
January 2, 2022 N88LeaveaComment on १० वर्ष निसन्तानको पीरमा बिताइएकी महिलाले एकै पटक जन्माईन तीन छोरा
काठमाडौँ। निसन्तानको पीरमा करीव १० वर्ष गुजारेकी एक महिलाले एकैपटक तीन जना .(तिम्ल्याहा) सन्तान जन्माएकी छन् । जुम्लाकी ३४ वर्षीया एक महिलाले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा आइतबार विहान तीन जना सन्तान जन्माएकी हुन् । लामो समय निसन्तान समस्या भोगेकी ती महिलाले टेष्टट्युव बेबी भनिने इन्भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभिएफ) विधिबाट तिम्ल्याहा छोरा पाएकी हुन् । नर्भिकको आइभीएफ सेन्टरको […]
कोरोनाका २ नयाँ लक्षण देखिए ! सावधान
January 2, 2022 N88LeaveaComment on कोरोनाका २ नयाँ लक्षण देखिए ! सावधान
काठमाडाैं । विश्वभर फेरि एक पटक कोरोनाभाइरसका केसहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। बेलायतमा पछिल्लो एक साताभित्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ३० हजार नाघेको छ । डेली स्टार वेबसाइटका अनुसार बेलायतको अवस्था यस्तो छ कि दैनिक हजारौं नयाँ कोरोनाभाइरसका रिपोर्ट भइरहेका छन्। त्यहाँ कोरोनाको नयाँ ओमिक्रोन भेरियन्टले लगभग पूरै बेलायतलाई प्रभावित गरेको छ। कोरोना संक्रमण […]
जनवरीमा सूर्य देव स्वयंले चम्काउनेछन् यी ४ राशिको भाग्य, हरेक काममा हुनेछ प्रगति
January 2, 2022 N88LeaveaComment on जनवरीमा सूर्य देव स्वयंले चम्काउनेछन् यी ४ राशिको भाग्य, हरेक काममा हुनेछ प्रगति
वृश्चिक राशिका मानिसहरु यो महिना आत्मविश्वासी रहनेछन् । काममा उन्नतिको प्रशस्त अवसर मिल्नेछ । व्यापार विस्तार हुनेछ । आकस्मिक आर्थिक लाभका कारण धनको अभाव हट्नेछ । काठमाडाैं । सन् २०२२ सुरु भएको छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार जनवरी महिनामा केही ठूला ग्रहहरुको गोचर हुने भएको छ । ग्रहमा राशि परिवर्तनले व्यक्तिको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। प्रत्येक राशिका व्यक्तिहरूमा […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउरालीकाे दर्शन गरी हेर्नुस् राशिफल, पुस १९ गते साेमबारकाे राशिफल !
January 2, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउरालीकाे दर्शन गरी हेर्नुस् राशिफल, पुस १९ गते साेमबारकाे राशिफल !
वास्तवमा ज्योतिषशास्त्रमा शुभ र अशुभ घडीहरू ग्रहहरूको चालबाट बनाइन्छ, जसले हाम्रो जीवनमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्छ। अर्थात् आजको दिन तपाईका लागि सामान्य होस् वा नराम्रो । यहाँ तपाईंले आफ्नो राशि अनुसार आफ्नो राशिफल थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । पुस १९ गते साेमबार मेष राशि आम्दानी बढ्नेछ। शक्ति बढ्नेछ। ठूला काम गर्ने मनस्थिति रहनेछ। व्यापार बढ्नेछ। […]
यस्तो छ प्रचण्डले पेश गरेकाे २३६ जना केन्द्रीय सदस्यको सूची
January 2, 2022 N88LeaveaComment on यस्तो छ प्रचण्डले पेश गरेकाे २३६ जना केन्द्रीय सदस्यको सूची
काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम पेश गरेका छन् । आइतबारको बन्दसत्रमा प्रचण्डले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये २३६ जनाको नाम प्रस्तुत गरेका हुन् । आइतबार बन्दसत्रमा प्रचण्डले पेश गरेको नाम हलले तालीका साथ अनुमोदन गरेको छ । प्रचण्डले ६३ सिट खाली गरेर खुलातर्फ १११ र समावेशीतर्फ १२५ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम घोषणा […]
January 2, 2022 N88LeaveaComment on रासायनिक मल दिन नसकेपछि प्राङ्गारिक मलले काम चलाउन किसानलाई कृषि मन्त्रालयको सुझाव
काठमाडाैं । रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्राङ्गारिक मलले काम चलाउन किसानलाई आग्रह गरेको छ। यो वर्ष पनि रासायनिक मलको चरम अभाव भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मलको आपूर्ति हुन नसकेपछि बजारमा मलको अभाव भएको मन्त्रालयले स्विकारेको छ। मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी दिनमा माग हुने मलको चाप थेग्न नसकिने प्रष्ट […]
महराले महासचिव नछोड़ने अड्डी कसेपछि प्रचण्डले खोलिदिए १४ वर्ष अघिको पोल…. !
January 2, 2022 N88LeaveaComment on महराले महासचिव नछोड़ने अड्डी कसेपछि प्रचण्डले खोलिदिए १४ वर्ष अघिको पोल…. !
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन जारी छ । महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज निर्वाचन हुनेछ । पार्टीको शिर्ष पद अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) निविकल्प भएपनि अन्य पदमा रस्साकस्सी चलेको छ । उपाध्यक्षमा पनि कुरा मिल्ने ठाउँ भएपनि महासचिवमा आधा दर्जन बढि नेताहरुले दावि गरेका छन् । त्यसमध्येका एक हुने पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रचण्डले उपाध्यक्ष […]
१० मन्त्री र २० सांसदलाई एकैपटक कोरोना संक्रमण
January 2, 2022 N88LeaveaComment on १० मन्त्री र २० सांसदलाई एकैपटक कोरोना संक्रमण
एजेन्सी। भारतको महाराष्ट्र प्रदेशका १० मन्त्रीलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री अजित पावारले अरु २० प्रदेश सांसदहरुलाई पनि संक्रमण भएको जानकारी दिएका भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। पावरले कोरोनाभाइरसको महामारी तीव्ररुपमा फैलिएकाले आम नागरिकस्तरबाट पनि उच्च सतर्कता अपनाइनु पर्नेमा जोड दिएका समाचारमा उल्लेख छ। सरकारले लागू गरेका नियमहरुको पालना नगर्दा र […]
अन्तिम तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा, गठबन्धन फुट्ने पक्का !
January 2, 2022 N88LeaveaComment on अन्तिम तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा, गठबन्धन फुट्ने पक्का !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग सम्झौता ९एमसीसी० संसद्बाट पारित गर्नेगरि अघि बढेका छन् । उनले आफूनिकट नेताहरुसँग यो विषयमा छलफलसमेत थालिसकेका छन् । स्रोतकाअनुसार उनले सत्ता गठबन्धनबाट एमसीसीको विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको र सहयोग नहुने देखेपछि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० को साथ लिनेगरि तयारी थालेका छन् । ‘आजरभोलिभित्रै प्रधानमन्त्री देउवा र […]